एक खर्ब कृषि सहुलियत कर्जाको उपलब्धि खै ? – Nepal Japan
एक खर्ब कृषि सहुलियत कर्जाको उपलब्धि खै ?
टाठाबाठा कृषि फार्म दर्ता गर्छन्, वित्तीय संस्थासँग सस्तो र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छन्
नेपाल जापान ३० श्रावण १५:५४
कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र निर्वाहमुखी समेत हुन नसकेको यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले राज्यले कृषि व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरी उत्पादन बढाउने योजना बनाएर कार्यान्वयन पनि भैरहेको छ ।
तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा अथाह वितरण भए पनि उत्पादन भने दैनिक घट्दो छ । यसै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै धान र चामल गरी ५० अर्बभन्दा बढीको आयात भयो र सोही वर्ष एक खर्बभन्दा बढी कृषिका लागि सहुलियत ऋण प्रदान गरियो ।
राज्यको यत्रो लगानी कहाँ गयो ? राज्यले कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन । गत असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्तिले राज्यबाट रु एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् । सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको कूल बजेटको झण्डै पाँच प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसो त राज्यले कृषि क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को कृषि बजेट गत आवको भन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आवमा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो । एकातिर लगानीयोग्य रकमको आकार बढ्दै गएको भए पनि उत्पादनको दायरा भने खुम्चिँदै गएको छ । कृषिको परनिर्भरता हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा कतै दुरुपयोग भएको त होइन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रतिमहिना झण्डै रु अर्बको चामल आयात हुनुले कृषि विज्ञले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्यत्र लगानी भएको शङ्का गरेका छन् ।